Kurudzira yako iTunes Podcast ine Smart App Banner | Martech Zone
Kana iwe waverenga bhuku rangu chero nguva yakareba yenguva, iwe unoziva kuti ini ndiri Apple fanboy. Izvo zviri nyore maficha senge ini ndiri kuzotsanangura pano izvo zvinoita kuti ndinzwe zvigadzirwa zvavo uye maficha.
Iwe pamwe wakacherekedza kuti kana iwe ukavhura saiti muSafari muIOS kuti mabhizinesi anowanzo kusimudzira yavo yekushandisa nhare nayo Smart App Banner. Dzvanya pabhanhire, uye unoendeswa zvakananga kuApp Store kwaunogona kurodha pasi application. Icho chinhu chakakura uye chinoshanda mushe chaizvo kuwedzera kutorwa.
Izvo iwe zvaungave usina kunge waziva ndezvekuti Smart App Banner inogona zvakare kushandiswa kune kusimudzira podcast yako! Heano maitiro anoshanda. Yedu yekubatanidza kune yedu podcast ndeiyi:
Tichishandisa iyo nhamba yekuzivisa kubva kuURL yedu, tinogona kuwedzera inotevera meta tag pakati pemusoro wemaki tag mune yedu saiti:
Zvino, sevashanyi veIOS Safari vanoshanyira webhusaiti yako pane mbozhanhare, vanounzwa nemureza waunoona pane yedu saiti pamusoro. Kana vakadzvanya izvo, vanounzwa zvakananga kune podcast kuti vanyore!
Ini ndinoshuvira chaizvo kuti Android itore nzira yakafanana!
Tags: app murezaapuroItunesKushambadzira Podcastpodcast murezasafarismart app bannersmartbanner
Maitiro ekumanikidza iyo PDF Faira neAdobe